Miandrasana ny TAONA Vaovao - Fizarana 1 - Ny Tany Masin'i Vietnam Studies
Miandrasana ny TAONA VAOVAO - Fizarana 1
2613 Views Prof. Assoc. Hung Nguyen MANH
"Mifaninana mifanampy hifamihina amin'ny tsanganana amin'ny vondron'olona". Na izany aza, tsy marina ny hoe matahotra ny tanàna rehetra "Olitra sy devoly", fa ny sasany amin'izy ireo dia manamboatra fomba amam-panao mazàna sy fanao isan-karazany arakaraka ny toe-javatra iainan'izy ireo na ny toetrany ara-kolontsaina sahala amin'ny trano iombonana Đông Kỵ (Bắc Ninh) isan-taona, amin'ny ora fiasan'ny tetezamita, raha tototry ny setroka-emboka manitra ny alitara, dia nisy anti-dahy efatra nisolo tena ny tanàna efatra nifaninana nifamihina hifamihina ny tsanganana ao amin'ny tranon'ireo kaominaly mba hifampitady hery. Ity fomba amam-panao ity dia tafavoaka velona amin'ny endrika fanangonana miaramila an'i Mpanjaka Thiên Cương, mikendry ny hanetsika ireo hery rehetra hanafaka ny firenena toa izany Saint Gióng miady amin'ny AN mpanafika.
Ny fomba amam-panao hoe "Fisodihan'ny hut"
Fahatsiarovana ny fandresena ny Mpanafika (teo ambany fitondran'ny Mpanjaka Hùng Vương faha-6), olona ao amin'ny tranon'ny kaominaly Village Phong Doanh (Bình Dương, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) nokapohiny ny amponga sy ny gongs nanentana ny olona rehetra hihazakazaka mankany amin'ny lalan'ny vohitra mankany amin'ny toerana antsoina hoe "Mô nhà chòi? " (ny valan-trano). Io fomba fanao io dia mandeha amin'ny maraina ary antsoina hoe "mamindra ny trano". Ankoatr'izay, nahita fomba amam-panao hafa tany am-boalohany koa izahay Taona vaovao's Eva, izany hoe fomba fanaon'ny "fametrahana olona ho amin'ny sabatra".
Antony sy Devoly
Izahay dia aseho vehivavy mipetraka eo anoloan-tsolika ary manisy zavatra amina sakay. Ireo taratasy ao Nom fampahafantarana antsika bebe kokoa. Amin'ny fotoan'ny Tet ny olona dia manamboatra olitra mba hanenjehana ireo olitra amin'ny taom-baovao. Tsy misy intsony io fanao io. Tamin'ny fanangonana fomba amam-panao sy ny fahazarana any amin'ny faritra lemaka ao Vietnam Avaratra, nahita olona fika niaraka tamin'ny fihetsika isika naneho ny fiheverana ny fametrahana ny valan-javaboary any anaty sakamalaho, mba hisorohana ireo olitra ho tonga mahery any an-dakozia:
Kính Kiến Kình Cang (andininy tsy azo fehezina)
Nataoko an-dRamatoa Ant I mandatsako ny vohitra manontolo Antsany
Amin'ny andro farany amin'ny taona dia misy ny antitra sasany tsy sahy mijanona ao an-trano ary handeha any amin'ny pagoda na tempoly. Miandry eo ry zareo mandra-pahatongan'ny taona vaovao (ny ora tetezamita) hiverina mody. Satria mino izy ireo fa misy karazana devoly antsoina hoe “Vũ Tuần”Izay naha-tezitra azy ireo na dia eo aza ny firaisana ara-nofo. Antsoin'ny olona ny andro telo farany amin'ny taona - ny telo mahafaty.2
Amin'ny andro farany amin'ny taona, H. OGER ary ny mpandrafitra azy dia manandrana mirakitra ireo sary farany. Eny an-dalambe, dia mandeha haingana tahaka ny olona mihazakazaka aorian'ny minitra sisa tavela. Mponina iray mandeha tongotra miaraka amina payona dia mitondra ranon-drongony eny an-tsorony - tongony ho fanomezana ho an'ny razambeny. Vehivavy mitondra ny fanatitra ho azy ao amin'ny pagoda. Mpanompo izy araka ny nasehon'i H. OGER.
Sary.1: Ny fihantonana
An'iza io fihodinana io (Fig.1)? Tsia! Miorina amin'ny baikon'ny filankevitra ao amin'ny zana-bohitra izany. Ny akanjo dia mbola maina eo an-tampon'ny tafo (Fig.2). Tokony hesorina avy hatrany izy ireo.
Ao amin'ny 30th ny volana farany - ny andro farany tamin'ny volana volana farany tamin'ny taonan'ny volana - andro iray nahatonga ny olona hahatsapa fientanam-po sy velombelona, ​​toa miandry ny fisehoan-javatra lehibe efa hitranga eo amin'ny fiainany. Iray andro sisa tavela, raha ao amin'ny fianakaviana, ny zava-drehetra sy ny olana rehetra ao amin'ny fianakaviana lehibe na kely lavitra na akaiky, dia tokony halamina na ajanona vetivety ny olon-tsotra na ny manan-danja. Any avaratra, matetika ny olona dia mila mamita ny asany amin'ny fambolena ny Tet poste tamin'ny mitatao vovonana, ao afovoan-tany Vietnam, dia tsy maintsy vita ny tolakandro, na any atsimo aza, tsy maintsy vita hatramin'ny hariva ka hatramin'ny hariva. Araka ny fahazarana taloha, indray mandeha Tết poste nambolena, ny olona dia tokony hiomana ny hanasa ny razambeny hiverina hiverina hahafinaritra Tet miaraka amin'izy ireo (sahala amin'ny any amin'ny Kẻ Rị, Kẻ Chè, Distrika Đông Sơn, Thanh Hoá).
Sary.2: Ny tampon-tafon-trano
Amin'izao vanim-potoana izao, ny alohan'ny razana dia tsy maintsy ao anaty lamina apetraka-paoma alohan'ny hanohizana ny lanonana hanasana ny razana iray hiverina hankafy ny 3 andro miaraka amin'ny zavatra mahamaina azy ireo. Taorian'ny lanonam-panasana rehefa nodorana ny tapa-ditin-kazo manitra, dia nesorina ny vilia lovia izay natolotra ho fanatitra ary ny fianakaviana rehetra dia niara-nivory nanodidina ity sakafo mafana sy mahamety ity. Mikasika ny Fianakaviana Confucianes, io sakafo amin'ny faran'ny taona io dia mitahiry ny fikojakojana ny fomban-drazana tsara sy mendrika.
In Vietnam avaratra, ny lanonana fifampiarahabana nataon'ny razana dia mety hankalazaina ao roa toetra:
1) Asehoy ny fanatitra eo amin'ny alitara, ny labozia maivana, manolotra ditin-kazo manitra ary manomboka manompo amin'ny mitataovovan'ny 30th ny volana farany (izany amin'ny 12:00 maraina). Atao ao an-trano fotsiny ny lanonana fifampiarahabana, tsy mandeha any am-pasana ny olona. Ny lohan'ny fianakaviana, manao akanjo tsy miakanjo, dia mitsangana eo anoloan'ilay alitara, mandrehitra tapa-kazo manitra ho azy ary mivavaka:
"Vietnam, taom-bolana (Mt Mão, Mậu Thân…) volana… tondra-dririnina, faha-30 amin'ny volana volana faha-12. Izaho…, miandraikitra ny fanompoana, teraka ao an-tanàna…, distrika…., Faritany… miaraka amin'ny mpianakavy rehetra dia in-jato."
Manolotra tamim-panajana izahay ka tapa-ditin-kazo, volamena sy volafotsy vita amin'ny taratasy joss, voankazo, lovia fety, alikaola ary rano, betel sy areca-nut ary ny zavatra hafa rehetra. Manasa am-panajana ny razambentsika rehetra, raibe, renibe, nenibe, raibe, renibe, ray, reny, dadatoa, rahavavintsika, rahavavintsika, hiverina indray hitory ny fitiavan-tsaintsika. Manantena izahay fa: hiaro ny ankohonantsika ny razambentsika, hatramin'ny taloha ka hatramin'ny tanora, ary hanome azy ireo fahasambarana, fiarovana, fandriam-pahalemana ary hampandeha tsara ny zava-drehetra amin'ny fianakavian'izy ireo sy ny fanambinana betsaka. Tongava miakatra sy mankafy ny atitray.3
Rehefa avy mivavaka dia miala ny loham-pianakaviana, manontany ny toerany ho an'ny ankohonany tsirairay, mivavaka kosa ny mombamomba azy ary mifanaraka amin'ny laharam-pianarany ao anatin'ny fianakaviana, ny voalohany dia avy eo ny anjarany ny zon'ny vohitra.Villageáp Cầu Village, Bắc Ninh) ary mifanaraka amin'ny lanjan'ny Fiarahabana lanonana. Amin'ny tolakandro 30 amin'ny faha-12th volana mafana, ny lohan'ny fianakaviana sy ny fianakaviany rehetra dia mitondra fitaovam-piadiana sy sotro miaraka amin'ny taratasy joss sy zava-manitra amin'ny fasan-drazany mba hamafana ny ahitra (hisorohana ny fakany hipoitra amin'ny vatam-paty sy handondona ny sisa), atsofohy amin'ny fasana sy hadio izy ireo. Avy eo, nandrehitra tapa-kazo manitra ditin-kazo manitra ny ankohonana rehetra, mivavaha, avy eo afangaro amin'ny fasana ny vovoka manontolo. Ny vavaka dia natao hanehoana ny hafanam-po, ka manasa ireo razana hiverina sy hankafy Spring miaraka amin'izy ireo.
Rehefa nitsaoka ny razana dia nandidy ny olona handavaka lavaka ao an-tokotaniny ny lohan'ny fianakaviana Tet pole. Izy ireo dia mamafy sokay vovoka amin'ny tongotry ny tsato-kazo miendrika zana-tsipìka sy zana-tsipìka mba hitodihana any amin'ireo fanahy ratsy mivezivezy eny ivelany, ka manakana azy ireo tsy hiditra ao an-trano. Rehefa avy niarahaba ny olona dia mbola mila miandry mandra-pialan'ny ala-emboka manitra hampidina ny lovia fety; Avy eo, mivory manodidina azy ny fianakaviana manontolo mba hankafy ny sakafo amin'ny alin'ny volana (Fig.3). Taom-baovao, fotoana manan-danja, feno ny fahafaham-po amin'ny fitandremana ny fitsipika marina. Ny sarin'ny toy izany Faha-30 ny volana faha-12 volana na ny Faha-30 amin'ny Tết tsy an'ny fianakavian'olon-drehetra, satria misy toe-javatra mampalahelo isan-karazany toy ny fisarahana amin'ny ankizy, manangona trosa, mitaraina noho ny fihomehezana… Hoy ny olona tamin'ny andro taloha:
“Ny faharanitan-tsaina iray dia azo porofoina fotsiny rehefa misy lalàna iray.
Ny haren'ny olona iray dia tsy azo aseho afa-tsy amin'ny Faha-30 amin'ny Tết (Faha-30 ny volana faha-12 volana).
Sary.3: Sakafo mahazatra
… Tohizo ao amin'ny fizarana 2…
2 Araka ny JOSEPH TISSANIER - Teratany frantsay nipetraka tany Thăng Long tamin'ny 1658 - 1663 - izay nandany Tết dimy tany Tonquin.
3 Araka ny voalazan'i TOAN ÁNH - Finoana any Vietnam - Boky 2 - Trano famoahana Nam Chi - Saigon 1968.
◊ Loharano: Taom-baovao fahita Vietnamianina - Fetibe lehibe Asso. Prof. HUNG NGUYEN MANH, Doctor of Phylosophy in History.
◊ Ny lahatsoratra sahisahy sy sary sepia dia napetrak'i Ban Tu Thu - www.hnororixn.com
◊ Miandrasana ny TAONA VAOVAO - Fizarana 2
(Visited 1,264 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Miandrasana ny TAONA VAOVAO - Fizarana 2
Ny fomba fanaon'ny RECELEBRATING TẾT →
Ny Tany Masin'i Vietnam Fianarana - FAHOROA ARTIKELY
Comments Off ao amin'ny The Holy Land of Vietnam Studies - DIRECTORY of ARTICLES
Fikambanan'olona Dokotera 54 ao Vietnam
Comments Off ao amin'ny vondron'olona Duo 54 amin'ny vondrom-poko XNUMX any Vietnam
GOUJIAN: sabatra Sinoa fahiny izay manohitra ny fotoana (8,446)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (8,401)
INDRINDRA SADY ilaina hianarana ve i VIETNAMESE? (7,669)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (7,055)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (6,178)
Ny vondron'olona Vondron'olona 54 manana foko foko any Vietnam (5,797)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,738)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,119)
FIAINANA fohy momba ny SORATORANA FARANY VIETNAMESE - Fizarana 2 (4,920)
Miaramila sy basy (3,495)
DO QUYEN - Ilay tantaram-pitiavana
Comments Off amin'ny DO QUYEN - Ny tantaran'ny finamanana
Fandaharana amin'ny tantaran'ny VIETNAMESE - Fizarana 1 (# 2500 taona)
Comments Off amin'ny fizotry ny tantara VIETNAMESE - Fizarana 1 (# 2500 taona)
Fitsidihana anio: 14
Fitsidihana omaly: 320
Andro farany 7 nitsidika: 2,320
Total visits: 433,500